Wholesale Soy wakisi girazi muchirongo votive kenduru fekitari uye vagadziri | Winby
Soy wakisi masoni girazi chirongo votive kenduru mune yakajeka kenduru mudziyo
Kenduru raipenya. Rainhuwirira zvikuru kubva pakutanga asi risingakundi. Yakatsva zvakaenzana uye kunyange iyo chirongo yaive yakapusa uye yakatsvinda ichitaridzika.
Iyo inonhuwirira inonakidza uye inogadzira kunhuwirira kukuru kweangu huni yekudzidzira kamuri / yekurara.
Mashoko Bvisa girazi chirongo + soy wakisi + chivharo chesimbi
Saizi 9cm (Upamhi) * 11m (Kureba)
Wax uremu 250g
Huremu hwese 515g
Pashure: chaiyo soya masoni chirongo inonhuhwirira kenduru
Zvadaro: Yakakwira mhando inonhuhwirira kenduru
Electroplated Luxury Soy Wax Inonhuhwirira Glass nechirongo ...
nyowani dhizaini yekushongedza kenduru
yakavanzika logo yekushongedza kenduru-Bhuruu / Grey / Dzvuku